WhatsApp maka Mac ga-enye gị ohere ịkwụsịtụ wee maliteghachi ndekọ olu | esi m na mac
WhatsApp maka Mac ga-enye gị ohere ịkwụsịtụ wee maliteghachi ndekọ olu
Maka ọtụtụ ndị ọrụ (gụnyere onwe m), ndekọ olu bụ njọ karịa mgbe chepụtara. Enweghị m mkpa igbu oge m n'ige ntị ozi olu nke ọtụtụ nkeji ebe a na-emeghachi otu ihe ahụ, ugboro ugboro, mgbe enwere ike ikwu ya na ozi.
Otú ọ dị, ọrụ a na-ejiwanyewanye site na ndị ahịa WhatsApp na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ iji mee ka ọ na-ejikarị eme ihe. Dị ka ụmụ okorobịa si WABetaInfo mbipute 2.2201.2 nke WhatsApp Desktop maka Mac Ọ ga-agụnye otu ọrụ nke ga-abịakwa iOS.
Otu esi ezipu foto site na WhatsApp n'enweghi mma
Ana m ekwu maka ekwe omume kwụsịtụ wee maliteghachi ndekọ olu. Beta ọhụrụ a, kama igosi bọtịnụ iji kwụsị ndekọ ahụ, na-egosi bọtịnụ nkwụsịtụ.
Njirimara a dị mma ma ọ bụrụ n'oge ndekọ ozi, anyị ga-akwụsị ya iche echiche nke ọma banyere ihe anyị chọrọ ikwu, chọta ezi okwu ...
Ozugbo anyị kwụsịrị ozi ahụ, anyị nwere nhọrọ ime kpọọ ya ka ịhụ ma ọ masịrị anyị, maliteghachi ndekọ, zipu ya ma ọ bụ hichapụ ya wee malite ọzọ.
Mana gafere arụmọrụ, ọ nwere ike ịbụ a ezi ihe mgbu maka ndị ọrụ niile ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ ha na-eziga ozi nke ọtụtụ nkeji.
Banyere ụbọchị mmalite nke ọrụ ọhụrụ a, amaghi ama ugbu a. Njirimara a dị ugbu a na beta na ụdị iOS. Ruo mgbe ewepụtara ụdị ikpeazụ nke iOS nwere ọrụ a, atụla anya ịhụ ya na ụdị macOS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » WhatsApp maka Mac ga-enye gị ohere ịkwụsịtụ wee maliteghachi ndekọ olu
Amalitere usoro 138 nke Safari Technology Preview
MacBook Pro M1 Max kwadoro na ọ kacha mma maka ndị na-ese foto